SingForYou.net - Pyan Tway Kyi
Tags : pyan tway kyi... Minkha~!
By : Minkha on Feb 4, 2010
Score: 140 Rating: 5.00 Comments: 37
Pyan Tway Kyi's Description
SFY kaamyal tan the khan p arr pay kya tae nyiako mg nha ma myar arr lone ko kyay zu par!...... >>>>>> Minkha~!
cherrykokosai on Feb 12, 2010 0
ကောင်းတယ်ကွာ... အသံကော ၇ုပ်ကော... အပြင်မှာ သီချင်းဆို၇င်း သရုပ်ဆောင်၇င်...တော်တော်ကောင်းမှာနော်.... ဆက်လက်ချီတက်ပါနော်... အားပေးနေတယ်... ********* အများကြီးအများကြီး ပေးချင်တာ.........
clover on Feb 12, 2010 0
shal hma shal par pal =D
chan2008 on Feb 9, 2010 0
သေသေချာချာကြည့်ကြည့်... ချောဘူးလား.... တို့နယ်သားကြီး... ပြန်တွေးခိုင်းတာ.. ဘာလုပ်ဖို့လဲ... စာမေးပွဲမှာ... စာတွေမေ့ကုန်လို့ဆိုရင်တော် ပါရဲ့... တို့နယ်သား က... Emo Stlye နဲ့... စွံသွားရင်မမေ့နဲ့... SFY ကမောင်နှမတွေကို..မေ့နဲ့နော်... ပေါက်သွားရင်... ကျွန်တော်တို့ပါရင်ပါမှာ... (...) ပေါက်ရင်... :D သေချာတယ်... ရေပါအလောင်းခံရမှာ... သီချင်းဆိုရင် ဆေးလိပ်သောက်မှ... ပဲလားဗျ... Lung Cancer တို့... second hand smoking တို့ကို အားနားဦး... computer က မီးခိုးတွေထွက်လာရင်... ပြန်လျောရမယ်... နေတဲ့ရပ်ကွက် သိတယ်နော်.. တိုင်ပြောမယ်... Admin ကြီးေ၇ာ... ကောင်တီလူကြီးရယ်.. ဟင့်ဟင့်.... နယ်သားကြီးဆေးလိပ်သောက်သင့်ဘူး... ချောနေတဲ့... မျက်နှာကြီး... ပျက်ဆီးသွားဦးမယ်... နယ်သူ
MINHTWE on Feb 5, 2010 0
bro က မထင်ရဘူးနော် ... koaungkhaing ကိုပြောတာလဲ မလွန်ဘူးဗျာ့ အဟဲ ကောင်းတော့ကောင်းတယ် နည်းနည်းများတယ် ပဲပဲ ....:P
whitekisslay on Feb 5, 2010 0
KO MIHNKHA YAYYTT!! ill tar pyaut twer lo hitn par ei.........so twer tar yaw face yawww lannn twerr pe:)>>>>>>tagal ko narr htoung lo nice par pae shint**************!apyayy lwarr larr yaut arrr payy narr sin twer par tal shin:clap:clap:clap:bravvooooooooo~
koaungkhaing on Feb 5, 2010 0
ညီလေး မင်းခရေ... ပဲနဲနဲများပေမဲ့ကြည့်ကောင်းတယ် .နားထောင်ကောင်းတယ် အဆိုတော် ရုပ်ရှင်မင်းသားသာ လုပ်လိုက်ပါတော့ကွာ စိုင်းစိုင်းတို့ ထွန်းထွန်း မင်းမော်ကွန်းတို့နားသွားရမယ်
punttatkaya on Feb 5, 2010 0
nga bro G ka mite tel hay...yuu par ka lann ...vocal ka pyaw sa yar ma lo....sfy ka girl twe top nar bro G ye aso ne ta yount soung chat twe mar myway kone pe...:P.......ayan mite tel bro...:atb pal
lalaynge on Feb 5, 2010 0
ရုပ်မြင်သံကြားကို ခုမှနားထောင်ရတော့တယ်..အဆိုရော သရုပ်ဆောင်ချက်ရော ပြောစရာမရှိအောင် ကောင်းတယ်ဗျာ...********
sumaylay on Feb 5, 2010 0
susannyunn on Feb 5, 2010 0
my bro g...par tay pit....aheeeeeeeee;))))))))))apyin sar g par larz...:O :O :O..ama lay... mintarr tg loat loz ya p... gal paw tar.. chate kuu ma lwel nelz naw...:P :D.. myanmar pan yout yin mintarr loat tot chint.....aheeeeeeeeeeee>>> arr pay nar sin thwar par te...yote myin tan kyar g yay...............hehhehe.>>>>>>
sweetorchid on Feb 5, 2010 0
ပရိုဂျူဆာ လုပ်မလို့...ဘယ်လိုလဲ သဘောတူရင်အကြောင်းပြန် ပါ...ဒါပေမဲ့ကောင်းထက်စံကိုခေါင်းဆောင်တင်ရမလား...မင်းခကိုခေါင်းဆောင်တင်ရမလားခေါင်းစားရင်းပြန်တွေးကြည့်နေတယ်...နောက်တာ...ဆိုထားတာလေတော်တော်ကောင်းတယ်...အသံကလည်းရိုးသာတဲ့ အရိပ်တွေပါတယ်ကောင်းမှကောင်း....
chan2008 on Feb 5, 2010 0
ကျွန်တော်ကတော့... ကျွန်တော်ကိုပဲ ရွေးပါလို့... ကျွန်တော် ကတော့.... အဲလိုပဲ ထင်တယ်ဗျာ...
Mgyi on Feb 4, 2010 0
forevermoe on Feb 4, 2010 0
bro minkha yayyyy ...so htar tar ka moodapyae nae mo lar ma ti ta kal kg tar parr....ma moe arr pay twer par tal shinn..pyan tway tot buu pay lite p ..*********************************:)
maureen on Feb 4, 2010 0
mite tal byo... arr lone pae..:) :P.. mood nae so twar tarayan pae listen loe kg tal.. arr pay nay mal naw...***********************for u...
Thanzinchitthu on Feb 4, 2010 0
ဒို့bro ကအဆိုကလည်းကောင်း..ရူပါကလည်းအလန်းပဲ...ခံစား ချက်နဲ့ဆိုသွားတာလား bro ရ..mood အပြည့်နဲ့ကိုဆိုသွားတာ အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ..ညီလေးအားပေးနား ဆင်သွားပြီနော်...**********************
hippo on Feb 4, 2010 0
မိုက်တယ် bro ရေ ... *****
bothaw528 on Feb 4, 2010 0
nwaynway on Feb 4, 2010 0
bro ka kha na hka na pyan twe nay tar ko.hote par pi.carry on.5 stars4u. :P
sch7677009 on Feb 4, 2010 0
d song ko ayin ka ma listen phu bu...nyi so ter song nae lite tal...listen lo lel kg tal...nyi yae fri add htar tal...
khanttayza on Feb 4, 2010 0
Bro: yay pyan tawy ma nay nae byar shouk par tae !! hak hak hak !! Good tae byar xo thar tar !!!a' mike sar gyi pae !!! Bravoooooo Bro:!! 5* for u !!
thaku on Feb 4, 2010 0
U look like little sad >P But u did very well N sweet voice..
myautmuulal on Feb 4, 2010 0
Gan NA win myaut lon tatakyi so tar bal lo myo bar late? pyan twawe kyi ,,, thu myar sseee ka money bal loud chee htar lal so tar:P kg bar tal kg bar tal,,, ma kg bu lope pyaw lope mha ma ya tar :( ***** nyin pal mhar soe yin khoe pyae :P
Minkha on Feb 4, 2010 0
thi chin tal pop.... pyaw pya bu! that chin that... :P tway tot bu.... ngar ka ya sa yar shi mha ta ti ya tar.... :D..... :sutti.....nyin pal mhar soe loh khoe pyay yin jail htae yout mhar pop.... :(
thant on Feb 4, 2010 0
pyan ma twayy kyi tot par buu......pay lite pye5stars......so htar tar kg lo.........******
turikimuriki on Feb 4, 2010 0
nice singing as always par bro minka yay ... bravoo ... 5*4u :)))))))))))
pp01 on Feb 4, 2010 0
Wow..bro yay.. aso yaaw..athan yaw..pae yaw:D taw taw kg tal..5* tan tal:D*****
saikyaw on Feb 4, 2010 0
chitmoe2009 on Feb 4, 2010 0
a yan kaung par tal Minkha yay..5*****fu???
jedi on Feb 4, 2010 0
kg par tae byar
Ilovemusic on Feb 4, 2010 0
ချဲ ဂဏန်းလို ပဲ ငြိမ်အောင် စောင့်နေတာ.....တင် လိုက်...ဖျက်လိုက် လုပ်နေလို့.....ခုတော့ နားထောင်..အားပေးသွားပြီ....အရမ်းဂါတ်တယ်....ရေလည် မိုက်ရယ်ကွာ.....၅စတား..ပေးခဲ့တယ်ဗျာ....။
KoBurma on Feb 4, 2010 0
အသံရော အရုပ်ရော အဆိုပါ ကောင်း၏ (ပဲများလို့ပိုပြီးကောင်းသွားတာ နေမှာ ဩဩ ပဲပလာတာနဲ့ ရောသွားလို့ဟက်ဟက်ဟက်စ်) နားထောင်လို့ အလွန် ကောင်း၏ ... ၅စတားစ်... :):P:D
MH on Feb 4, 2010 0
အလိုလေး ... အဘ ဘယ်ကထလာပါသလဲ ။ မတွေ့  တာကြာပေါ့။ ...
yeyintaung86 on Feb 4, 2010 0
လန်းတယ်ဂါဒီရာ..လုံးဝကိုခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ဘဲ...အားလုံး. ပါဖက်ဘဲ..အားပေးနေမယ်.အကို..
lovelybaby11 on Feb 4, 2010 0
i like this song so much and really nice to listen,bro Minkha!
melody_queen on Feb 4, 2010 0
atann lay yaw .. yote lay yaw ... mite tal naw .. khait twar p .. hehe .. 5* for you .. :)
skywalker on Feb 4, 2010 0
ရုပ်မြင်သံကြားလေးရေ....ပြန်တွေးကြည့် တာပဲ.. ဘာမှကိုမမှတ်မိဘူးဟေ.....ဟီး ကောင်းလေစွ.....
Subscribe to Minkha